Yini i-ROI ekhanda elibuhlungu? | Martech Zone
Yini i-ROI ekhanda elibuhlungu?
NgoLwesibili, ngoJuni 9, i-2009 NgoMgqibelo, Juni 27, 2015 Douglas Karr
Izinkampani zesoftware nesoftware njengezinkampani zensizakalo zicabanga ukuthi zithengisa ubuchwepheshe. Ubuchwepheshe bokuthengisa bulula… bunobukhulu, buthatha isikhala, bunezici ezichazayo, imikhawulo, amakhono… nezindleko. Inkinga ukuthi abantu abaningi ababathengi ubuchwepheshe.
Nikeza inhlangano enhle yokuthengisa isikhathi esanele futhi bangaxhaphaza noma yikuphi isicelo sesiphakamiso isu eliphumelelayo nelizuzisa inkampani. Ngisebenzela inkampani enomncintiswano oyinhloko (ngokombono wethu wethemba - hhayi owami) isoftware yomthombo ovulekile. Uma besithengisa isoftware ebizayo ebincintisana ngqo nesoftware yamahhala, besingeke sibe namakhasimende angama-300 +. Isizathu sokuthi kungani sikhula ukuthi asiyona empeleni ukuthengisa isoftware - sithengisa imiphumela.
Amathemba ethu akholelwa ukuthi inani lokuthuthela kupulatifomu yethu yokubhuloga ukuthi lizoholela alikho ikhanda phansi komgwaqo. Azikho ikhanda ngesikhathi sokuphumula, alikho ikhanda isondlo, alikho ikhanda ezindabeni zokuphepha, alikho ikhanda ngokonakala, alikho ikhanda ekusebenzeni, alikho ikhanda ekufundiseni abasebenzisi, alikho ikhanda ngoba kunzima ukuyisebenzisa… futhi ngaphezu kwakho konke alikho ikhanda kusukela ekuhlulekeni.
Mhlawumbe umncintiswano wethu wangempela yiTylenol!
Amanye amathemba ajabulela ithuba lokuphathwa yikhanda… lokho kulungile… asizelanga bona lapha. Kungcono sisebenze namakhasimende agxila emiphumeleni. Imiphumela njengoba kuchaziwe ngu- nabo, hhayi us.
Noma kunini lapho inkampani yakho itshala imali kwezobuchwepheshe, akuyona i-hardware nesoftware (onjiniyela abaxolayo!) Abayithengayo - noma ngabe ipholile kangakanani. Lokho inkampani yakho okutshala imali kakhulu kuyo ngabantu abaphambili nangasemuva komkhiqizo. Inkampani yakho itshala imali kumthengisi abathembayo. Inkampani yakho itshala imali kusomabhizinisi oqale inkampani oyazi njengomholi. Inkampani yakho itshala imali kubantu - abantu abaxazulule inkinga eqhubeka ikunikeza ikhanda.
Ikhasimende elilodwa elisebenza emkhakheni kahulumeni lisanda kungitshela:
UDoug - anginandaba RIO. Anginandaba nokuthi isicelo sakho singasenzela imali engakanani. Anginandaba nama-upsell. Anginandaba nobuchwepheshe. Isizathu sokuthi ngikhokhele inkampani yakho kungenxa yokuthi ukhona ukuphendula ifoni noma i-imeyili uma nginombuzo… futhi uyazazi izimpendulo. Qhubeka uphendule ucingo ungisize sizonamathela. Yekela ukuphendula ucingo ngizothola umuntu ongakwazi.
Kungalesi sizathu ukuthi insizakalo yamakhasimende iyingxenye ebucayi yokuqalwa kobuchwepheshe obukhulu. Angikhathali ukuthi uhlelo lwakho lokusebenza luphole kangakanani… lapho uqala ukutshela amakhasimende akho ukuthi yini ayikwazi babasize, ungalindeli ukuthi bazosayina ukuvuselelwa (ungalokothi ukhumbule i-upsell!). Amakhasimende akho afuna impumelelo futhi ayethemba ukuthi uzobanika wona. Kungcono ulalele futhi uphendule. Okungcono kakhulu - kufanele uqhubeke ngamandla ukwakha impumelelo yamakhasimende akho.
Ngisho ngaphakathi kweSoftware njengomkhakha Wezinsizakalo, izinkampani zithole ukuthi azikwazi ukufihla ngemuva kwekhasi lokusekelwa kwamakhasimende noma isisekelo solwazi… noma okubi kakhulu, isithangami samakhasimende. Amakhasimende e-SaaS adinga ukuqonda ukuthi angasisebenzisa kanjani ngokuphelele isisombululo asitshalile ukuze aphumelele. Lokho kudinga abasebenzi abanekhono, abanolwazi abakuqondayo okudingekayo.
Laba baholi bayayiqonda indlela yokuphikiswa okuncane, bayakuqonda ukuthi bangawafunda kanjani amaklayenti futhi babone ukuthi ngabe angamathuba amahle okukhula noma obufakazi bamakhasimende… ngaphezu kwakho konke bayakuqonda ukuthinta amaklayenti uqobo. Akudingi imigomo enombono omfushane, ukuphazamisa izinqubo ezingayinaki impumelelo yamakhasimende, noma okubi kakhulu… ukuphatha okuncane lapho izinsiza sezivele zintula. Kudinga ukuqasha abantu obathembayo, ubavumele ukuthi benze izinqumo ezinhle egameni lenkampani, futhi basuse zonke izingqinamba zokusebenzela amaklayenti ngempumelelo (futhi ngenzuzo).
Ngabe unikeza amaklayenti akho impumelelo? Noma abasebenzi bakho bayabanika nje ikhanda eliningi?
Tags: delivraedgerankUkumakethwa Kwamaselula Nethebulethiuphawu lokungenzi-nzuzowebsUkubika Komphakathi